UMhango usengaya phesheya: Makaab
IMENENJA kaHellings “Gabadinho” Mhango ifuna lesi sibaluli silibhekise phesheya kwezilwandle eminyakeni ezayo.
UMike Makaab wePro Sport International, utshele izintatheli eseMoses Mabhida Stadium ukuthi indlela ashaya ngayo amagoli uMhango, ngeke angabaze uma amaqembu aphesheya engaqala ukubuza ngaye.
Lesi sibabuli saseMalawi, sesivalele phakathi amagoli awu-14 kwi-Absa Premiership kanti sisasalelwe yimidlalo eyishumi yonke ukunezezela amanye amagoli.
Sezikhona vele izinkakha ezidlale ebholeni laseNingizimu Afrika eminyakeni edlule, ezithipha uMhango njengozovalela amagoli amaningi kwi-Absa Premiership, uma kuphela isizini.
UMakaab uthe ubona ukuthi uMhango usethubeni elihle, wanezezela ngokuthi uma eqhuba kanje uzolifulathela leli.
“Silethe uMhango eNingizimu Afrika eminyakeni eminingi edlule. Maningi amaqembu abengayizwa indaba yakhe, amanye alawo maqembu AmaZulu neFree State Stars. Empeleni omunye umqeqeshi (emusho ngegama), akavumanga nokuthi ehle ebhasini sithi simzamela kuyena. Isizathu salokhu ukuthi uma umbuka akabonakali njengomdlali webhola osezingeni eliphezulu. NguClinton Larsen owamnika ithuba lakhe lokuqala kwiBloemfontein Celtic,” kuchaza uMakaab.
“Noma kade edlala emaqenjini awadlalelile kodwa benginakho ukusola ukuthi abamqondi kahle indlela adlala ngayo. Njengamanje usedlalela iqembu elithi uma lihlasela limsebenzise ngenxa yokushesha kwakhe. Ngaphandle kwalokho akalibheki ipali. Ngokwami yima siqala ukubona uMhango wangempela-ke manje,” kusho uMakaab.
Eqhubeka echaza uMakaab, uthe akangabazi ukuthi uMhango uzokhala emuke nomklomelo womshayi magoli ovelele uma kuphela isizini.
“Nakanjani uzowunqoba lo mklomelo. Empeleni angaya ngisho naphesheya kwezilwandle. Ngimbona esekhule ngokwanele. Asethembe nje ukuthi iPirates izozamukela izicelo zamaqembu uma sezifika. Ekugcineni ungumdlali wayo. Nokho nginobudlelwano obuhle nosihlalo (esho * -Irvin Khoza), futhi akakaze ame endlelni yomdlali ofuna ukuya phesheya kwezilwandle. Muva nje kusanda kuhamba uMarshall Munetsi, kanti noBenedict Vilakazi , Mbulelo Mabizela bonke wabadedela. Empeleni noLesley Manyathela washona esendleleni eya eFrance esezodlalela elinye lamaqembu akhona. Ngakho usihlalo akami endleleni yabadlali,” kulandisa uMakaab.
Azizokwehla kahle kubalandeli beBucs ezithi uMhango ngeke adlale ngempelasonto kwiNedbank Cup last 32, uma ezakhe sezibhekene neBidvest Wits ngenxa yamakhadi aphuzi.